Akụkọ - Industrylọ ọrụ na-agbanwe agbanwe - ụdị "Mexico" ụdị e-azụmahịa "Oke Osimiri Uhie"
Ọrịa a agbanweela n'ụzọ dị ukwuu ụzọ ndị Mexico si azụ ahịa. Ọbụna ịzụ ahịa dị n'ịntanetị anaghị amasị ha, agbanyeghị, ebe ụlọ ahịa na-emechi emechi, ndị Mexico na-amalite ịnwale ma nwee ọ enjoyụ n'ịntanetị na nnyefe ụlọ.
Tupu nnukwu mkpọchi n'ihi COVID-19, azụmahịa e-commerce Mexico anọwo na-elu elu na-ewu ewu, yana otu n'ime ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke e-commerce na ụwa. Dabere na Statista, na 2020 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ndị Mexico zụrụ ahịa na ntanetị, na n'etiti ọrịa a, ọnụ ọgụgụ ndị Mexico na-azụ ahịa n'ịntanetị agbawaala ma atụ anya ịrị elu 78% site na 2025.
Shoppingzụ ahịa Cross-border bụ akụkụ dị mkpa nke ahịa e-commerce Mexico, yana ihe dị ka pasent 68 nke ndị na-azụ ahịa e-Mexico na-azụ ahịa na saịtị ụwa, ruo 25% nke ahịa zuru ezu. Dị ka ọmụmụ nke McKinsey Consultancy mere, pasent 35 nke ndị na-azụ ahịa na-atụ anya na ọrịa ahụ ga-akawanye mma ma ọ dịkarịa ala ọkara nke abụọ nke 2021, ha ga-anọgide na-azụ ahịa n'ịntanetị ruo mgbe ọrịa ahụ gafere. Ndị ọzọ kwenyere na ọbụlagodi ntiwapụ ahụ, na ha ka ga-ahọrọ ịzụ ahịa n'ịntanetị n'ihi na ọ bụ akụkụ nke ndụ ha. A kọọrọ na arịa ụlọ abụrụla ebe ịzụ ahịa n'ịntanetị Mexico, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 60 nke ndị na-azụ ahịa na-azụta arịa ụlọ, dịka matarasị, sofas na kichin. Na ntiwapụ nke ọrịa ahụ na-aga n'ihu na-agbasa, usoro ezinụlọ ga-aga n'ihu.
Tụkwasị na nke a, mgbasa ozi nke mgbasa ozi ọha na eze ewetawokwa ohere maka mmepe e-azụmahịa na Mexico, ebe ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-aga na ebe nrụọrụ weebụ ịzụ ahịa site na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta. Citizensmụ amaala Mexico na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa anọ kwa ụbọchị na mgbasa ozi mmekọrịta, na Facebook, Pinterest, Twitter na ndị ọzọ kachasị ewu ewu na mba ahụ.
Ihe isi ike nye e-commerce na Mexico bụ ịkwụ ụgwọ na ngwa ngwa, ebe ọ bụ naanị pasent 47 nke ndị Mexico nwere akaụntụ akụ na ndị Mexico na-echegbu onwe ha banyere nchekwa akaụntụ. N'ihe gbasara akụrụngwa, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwa ngwa ugbu a nwere usoro nkesa tozuru etozu, mana ala Mexico dị iche pụrụ iche, iji nweta nkesa "kilomita ikpeazụ", ọ dị mkpa ka e guzobe ọtụtụ ọdụ.
Mana nsogbu ndị gbochiri azụmahịa e-azụmahịa na Mexico ka a na-ekwu okwu ya, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa e-commerce nke mba ahụ na-emekwa ka ndị na-ere ahịa nwee ịnwale. Enwere ike ibu amụma ya na mmalite “oke osimiri ọhụrụ na-acha anụnụ anụnụ” ọzọ, mpaghara ụwa azụmahịa e-commerce ga-aga n’ihu ịgbasa.